जाडोयाममा मोजा लगाउँदा होसियार, नत्र ज्यान पनि जान सक्छ ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / जाडोयाममा मोजा लगाउँदा होसियार, नत्र ज्यान पनि जान सक्छ !
admin December 16, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 138 Views
काठमाडौं । नेपालमा जाडोयाम सुरु भैसकेको छ । जाडोमा मानिसहरु सुत्दा मोजा लगाएर सुत्छन् । आज हामी मोजा लगाएर सुत्नु किन नराम्रो हुन्छ भनेर चर्चा गर्न गइरहेका छन् । यदि जाडोमा चिसोबाट बच्न बाक्लो मोजा लगाएर सुत्नेहरु मध्ये तपाई पनि हुनुहुन्छ भने यो खबर तपाईको लागि मात्र हो । तपाईको यो बानीका कारण शरीरमा रक्तसञ्चारमा समस्या आउन सक्छ ।
Previous मl हिलाको यो भागमा गरिने चुl म्बनले महिलालाई १०० गुणा बढी उll त्तेl जि,त बनाउँछ
Next एम्बुलेन्समा किन उल्टो (ECNALUBMA) लेखिन्छ?